संगीत दर्ता - छ, सबै माथि, गायन आवाज को एक नम्बर सुनिन्छ। यो पनि कुनै पनि सांगीतिक साधन को भूमि को दायरा हुन सक्छ। यो संगीत मा रजिस्टर को एक संक्षिप्त परिभाषा छ। र यो शब्द को अर्थ के हो? र कसरी "संगीत रजस्टर" विषयवस्तु वर्ग कान प्रशिक्षण मा व्याख्या गर्न?
"दर्ता" शब्द देर ल्याटिन (registrum) बाट अनुवाद गरिएको छ अर्थ "सूची, सूची"। ल्याटिन (regestum) बाट - "tabled फिट" छ।
संगीत दर्ता - एक साधन वा गायन आवाज को दायरा एक खण्ड। यो एक टोन द्वारा विशेषता छ।
यो गायन - आवाज (र कहिलेकाहीं कम, मध्य, माथिल्लो) को मात्रा छ। शरीर मा - यी ध्वनि परिवर्तन गर्न (दुवै कमजोर र बलियो) थुप्रै तरिकामा मदत गर्न सक्छ कि विशेष उपकरण हो।
दर्ता गर्नुहोस्। संगीत को संकल्प
विभिन्न सचेत प्रयोग गरिएको। पहिलो - यो गायन आवाज को एक श्रृंखला सुनिन्छ छ। दोश्रो - यो कुनै पनि साधन को दायरा फैलिएको। र, तेस्रो, केही उपकरण प्रयोग गर्ने उपकरणहरू।
यो प्रत्येक मा विस्तृत गर्न आवश्यक छ।
मानव ध्वनि (गायन) आवाज को एक अनुक्रम रूपमा दर्ता विचार, तिनीहरूले नै विधि द्वारा गाया छन् विचार गर्न आवश्यक छ। यसबाट तिनीहरूले नै Timbre छ कि निम्नानुसार। टाउको र thoracic cavities प्रत्येक व्यक्ति शेयर अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ टाउको, छाती र मिश्रित रजस्टर। केही आवाज प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तथाकथित falsetto रजिस्टर सुनिन्छ। अक्सर पुरुषहरु आवाज, विशेष गरी tenors गर्न सम्भव छ। एक रजिस्टर अर्को गर्न संक्रमण मा गायक ध्वनि उत्पादन केही कठिनाइ हुन सक्छ। यो कुनै आवाज बलियो पर्याप्त ध्वनि उठाएको वा छैन गर्नेहरूलाई मुख्य रूप हो। राम्रो परिणाम र अर्को एक रजिस्टर देखि एक चिल्लो संक्रमण हासिल गर्न, तपाईंले समतल Sounding आवाज पालन को पूर्ण सीमा को लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो कुरा को लागि रूपमा, संगीत मा मामला - यो नै Timbre छन् कि फरक वाद्ययन्त्रहरू दायरा को नै खण्डहरूमा छ। तर तपाईं विभिन्न रजस्टर मा नै साधन मा माधुर्य प्रदर्शन भने, ध्वनि को Timbre एकदम फरक हुनेछ।
विशेष उपकरण र ध्वनि को टोन र तीव्रता परिवर्तन गर्न प्रयोग उपकरणहरू। उदाहरणका लागि, पर्दादारवाद्ययन्त्र zaschipyvaem स्ट्रिङ मा ध्वनि नजिक Kolka परिवर्तन गर्न वा तार को एक सेट द्वारा बदलिएको छ।
विषय कसरी व्याख्या गर्न वर्ग कान प्रशिक्षण मा "संगीत रजस्टर"?
को विषय छोराछोरीलाई स्पष्ट थियो लागि, शिक्षक अग्रिम यो सोच्न आवश्यक र राम्ररी यसको लागि तयार "संगीत रजस्टर"। मुख्यतया, यो एक दृश्य एड्स र तयार गर्न आवश्यक छ वितरण सामाग्री। यो एक भालु र चरा संग कार्ड हुन सक्छ। तिनीहरू कक्षाकोठामा छोराछोरी धेरै के गर्न छ।
व्यायाम तपाईं गृहकार्य जाँच गर्न सक्नुहुन्छ सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि केटाहरू raspevki र अभ्यास संग गाउँछन्। तपाईं त नयाँ विषय को प्रस्तुति गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। पूर्व-तयार कार्ड वितरण गर्नुहोस्। प्ले प्ले "स्पैरो" Rubbaha र "भालु" Rebikov र संगीत चित्रण गर्ने वर्ण कार्ड उठाउनु गर्न अनुरोध। त्यसपछि तपाईँ प्ले "भालु" सानो लेखिएको भन्न आवश्यकता हो, र "स्पैरो" - उच्च। त्यहाँ औसत पनि छन्। यो रजिस्टर, हामी हाम्रो गीतहरू गाउन। त्यसपछि शिक्षक बच्चाहरु रातो र नीलो पेंसिल, एक चित्रित भालु र चरा संग कार्ड दिन्छ, र भन्छ यो पियानो को ध्वनि प्ले हुनेछ, र विद्यार्थीहरू जो मामला छ निर्धारण छ। उच्च-पिच ध्वनि ध्वनि हुनेछ जब, छोराछोरी गर्न टोकरी मा चरा, नीलो सर्कल आकर्षित यदि कम, त्यसपछि को भालु गर्न टोकरी - रातो। तपाईँले 5-7 ध्वनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मजबूत प्रश्न गर्न आवश्यक पाठ को अन्त मा, पाठ को लागि मूल्यांकन सेट र आफ्नो गृहकार्य निर्धारण गर्न।
यसरी, संगीत मा रजिस्टर - यो गायन आवाज को एक श्रृंखला केही उपकरण प्रयोग गरिन्छ कि कुनै पनि सांगीतिक उपकरण, साथै उपकरणहरू को दायरा भाग सुनिन्छ छ।
जीवनी Dzhennifer Lopes। जीवन को तथ्य
गायक Osipova Anastasiya: जीवनी, क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
जीवनी Malikova Dmitriya - एक सफल गायक, संगीतकार र निर्माता
यसलाई अहिले रक छ रूपमा Oginski Polonaise (पियानो टिप्पणीहरू लागि) एक पटक रूपमा लोकप्रिय थियो
लोकप्रिय कजान क्लब
कफी को किसिमहरु के हुन्
रूसी लोक गीतहरू विधाहरू। लोक गीत: लोक गीतहरू, लोरी, लोक
जाडो निराशा। यसलाई कसरी जोगिन?